Blog – Zaza no iriako
Salama e! Efa tsy ho 7 volana ve aho zay tsy nanoratra teo? Tena efa ela be zay, tsy hita moa fa tsy misy hambara firy fa de niandriandry teny. Zay ndray aho vao eto hitantara ny tohiny dianay. Manana vaovao hozaraina aho ka dia leoko manoratra ndray satria te hizara mafy an’ireto vaovao ireto … More Vaovao avy aty amiko e!
Leave a comment Vaovao avy aty amiko e!
Alatsinainy 07 Decembra 2015 : Egg collection Mazava hoany fa narahiko daholo reo torimarika natorony ilay mpampivelona ahy alohany hatongana tao amin’ilay clinic. 9 ora maraina : Tonga tao clinic mialoha izahay mivady, teo amin’ny efitrano fiandrasana izahay no nandro ,tsy tafapetraka mihitsiny aho fa nintsangana nivezivezy (tsara ihany mba zahay mivady irery no tao). … More Egg Collection : Finjinjana ny atody
Leave a comment Egg Collection : Finjinjana ny atody
Salama daholo Tafaverina ndray aho fa hanao famitinana ny zavatra niseho tamin’ny iny herindro lasa iny. Hoezahiko ampafatrina anareo oe Inona ndray zao hatao manaraka. Alatsinainy 30 Novembra : Fitilina ny ra sy scan Refa natao scan dia hita fa ilay havia mamokatra tsara noho ilay havanana. Notohizana ny tsindrona Gonal F ka nampitomboina ho … More Dingana ny 30 -06 Decembra 2015
Leave a comment Dingana ny 30 -06 Decembra 2015
Alahady 29 novembra 2015 Salama daholo ! Niverina ndray fa zay vao misy vaovao, ny vaovao moa dia oe manomboka tamin’ny 23 novembra teo ny “cycleko” .Efa eo ampanindron-tena aho nanomoka ny 24 novembra. Ho fitiniko eto ambany ary reo zavatra hataoko mandrapahatonga ny andro faha-8. Andro 1 : 23 novembra Tonga ny 22 novembra … More Manomboka ny tsindrona maro
Leave a comment Manomboka ny tsindrona maro
Talata 13 octobra 2015 Salama daholo e! Tena efa ela be zaho tsy nahavoasotra ato marina moa e! Eny e! Tsisy vaovao azo naroso dia aleo nangina aloha ,sady toa be asa loatra aho tatohoato dia lasa tsy mahavoasoratra mihitsiny. Mametraka ny fialantsiny hoanareo zay mpamaky ny lahatsoratra arosoko. Manana vaovao aho,vaovao zay azo lazaina … More Ny vaovao avy aty amiko.
Leave a comment Ny vaovao avy aty amiko.
Alahady 31 May 2015 Miarahaba antsika rehetra e! fa indrindra zay Reny rehetra sy zay mbola ho Reny sy hoan’izay maniry ho Reny amin’ity andro fety androany ty,ka mirary tontolo ‘andro mahafinaritra hoantsika rehetra. Zay ndray zaho fo tafaverina hanohy resaka fa tsy dia manana vaovao haroso loatra,ka lasa mangingina ny blog,misy manontany ahy ao … More Tratry fety Reny e!
Leave a comment Tratry fety Reny e!
Anio 27 Avril 2015 Ny 9 decembra maraina izahay no nanao an’ilay SSA,ary araka ny lazain’ny ilay mpitsambo mpanany dia tolakandro io ihany hafatarana valiny. (Afaka vakianao eto ny fizotran’ilay SSA) Nony tonga tolakandro ilay 9 decembra, dia tsy tafapetraka intsony aho,zara aza aho raha nisakafo atoandro tamin’io andro io,otrany naharary tampoka ahy mihitsy ny kiboko,tebiteby zany … More Valin’ny SSA – vaovao tsara
Leave a comment Valin’ny SSA – vaovao tsara